यूएईका लागि प्रस्तावित राजदूत आशा लामाको नागरिकतानै शंकास्पद ! « Surya Khabar
यूएईका लागि प्रस्तावित राजदूत आशा लामाको नागरिकतानै शंकास्पद !
फाल्गुन १६, २०७३
काठमाण्डौ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि प्रस्तावित राजदूत आशा लामाको नागरिकताका विवरणहरू शंकास्पद देखिएका छन्। २०४८ असोज १६ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको उनको नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपिमा उल्लिखित जन्ममिति, जन्मस्थान र नागरिकता नम्बर नै बेग्लाबेग्लै छन्।
पहिलोमा नागरिकता नम्बर २८८९ छ तर प्रतिलिपिमा भने २४२२ नम्बर छ। जन्मस्थान पहिलोमा विराटनगर १५, मोरङ उल्लेख छ भने प्रतिलिपिमा काठमाडौं लेखिएको छ। पहिलोमा जन्ममिति २०२१ कात्तिक १६ गते र बाबुको ठेगाना ओखलढुंगा उल्लेख छ, प्रतिलिपिमा भने जन्ममिति २०२१ वैशाख १ गते र बाबुको ठेगाना काठमाडौं लेखिएको छ।
‘प्रतिलिपि बनाउँदा कुनै पनि विवरण फरक पर्नु हुँदैन। सक्कलबमोजिम नक्कल ठीक हुनैपर्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो नागरिकताका विवरणहरू शंकास्पद देखिन्छ। सोमबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, आफूलाई सुविधा हुने गरी ठेगाना फेर्न पाइँदैन।’ उनले ठेगाना फेर्ने कार्यमा बदनियत देखिएकाले छानबिन आवश्यक देखिएको बताए। ‘असल नियत नै रहेछ भने पनि परिणाम खराब निस्कन्छ,’ उनले भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय (म्यानपावर कम्पनी) सञ्चालन गर्दै आएकी लामा नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूतका लागि सिफारिस भएकी हुन् ।
उनले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ बाट जनमोर्चा नेपालबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेकी थिइन्। उनले जम्मा १४ मत पाएकी थिइन्। लामाको १५ हजार कित्ता सेयर रहेको ‘जब ट्रयाक रिक्रुटिङ’ कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम, सेवा र सुविधा नदिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा २३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। पीडितले आफूहरू ठगिएको भन्दै म्यानापावरलाई कारबाही गर्न तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै उजुरी दिएका हुन् । यी उजुरीहरूमाथि छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ। साउदीस्थित नेपाली दूतावासले पनि उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।
कतारको आकर्षक कम्पनीको भिसा (कामदारको मागपत्र) हात पार्न गुरुङको सक्रियतामा कोइरालालाई राजदूत बनाएर पठाउन लागेको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। ‘कोइराला जानु भनेको गुरुङ गएसरह हो,’ उनीहरूका कामलाई निकै नजिकबाट नियालेका एक व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने, ‘श्रममन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतमा कोइरालाले हामीसँगै डिल गर्थे। अंग्रेजी राम्रो भएकाले देश बाहिरका एजेन्टसँगको डिलमा उनै बस्थे।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार कतार फाउन्डेसनको व्यापार हात पार्न उनलाई पठाउन लागिएको हो।
‘गुरुङले कतार फाउन्डेसनमा आफ्नो म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै पठाउने नीति बनाउँदै थिए। त्यसमा कोइरालाले नै भूमिका खेलिरहेका थिए,’ ती व्यवसायीले भने, ‘राज्यमन्त्रीबाट हटेपछि त्यो खेल रोकियो।’ त्यतिखेर कतार फाउन्डेसनसँग भएको पत्राचारको फाइल श्रम मन्त्रालयमै छैन।